A mkpado nchịkọta akụkọ (aka tagger) bụ a software na-eji dezie metadata echekwara na formats dị ka ID3 ke ọdịyo faịlụ. Nzube bụ isi nke a mkpado nchịkọta akụkọ bụ leruo na idozi ihe ọmụma ndị na-agbakwunyere n'ime multimedia faịlụ na iji mee ka ọ dị mfe maka ọrụ ka a mata egwu, na categorize ha dị ka kwa na ha onwe onye bookkeeping mgbakọ. Ọtụtụ online taggers dị na Internet na-azọpụta gị hassle nke na nbudata na wụnye software na mpaghara gị na kọmputa.
Na-online ID3 mkpado nchịkọta akụkọ, ị nwere ike bulite gị ọdịyo faịlụ na weebụ ngwa, na-eji ya dezie mkpa na ozi banyere faịlụ, dị ka aha onye na-ese, album, track ọnụ ọgụgụ, track aha, na genre. Nke a na-enyere gị n'ịhazi gị music n'ọbá akwụkwọ rụọ ọrụ nke ọma na-enweghị ibudata a tagger ngwa gị obodo ike mbanye.
N'elu 5 online mkpado editọ bụ:
Ị nwere ike iji nyere njikọ na-eji software online: http://tagmp3.net/index.php
TagMP3.net-enye gị ohere bulite gị ọdịyo faịlụ na free online ngwa ka nyegharịa ma dezie ID3 mkpado. Iji a online ngwa, ị nwere ike itinye ma ọ bụ gbanwee ihe MP3 faịlụ mbiet, ma dezie ọzọ dị mkpa na ozi agbakwunyere na ya. Star Rating: 4 n'ime 5 kpakpando (nkezi ọrụ fim)
The website nwere enweghị atụ uru n'elu nke ọzọ weebụsaịtị àjà-yiri atụmatụ, dị ka:
• Ọ bụ ọrụ enyi na enyi website.
• Ị nwere ike bulite ọdịyo faịlụ na a zoputagoro na kọmputa gị, ma ọ bụ ị nwere ike tinye URL nke onye ọdịyo faịlụ echekwara na ihe ọ bụla nke online ọdụ data.
• The ngwa weebụ-enyere gị aka tinye gị onwe gị chọrọ genre na edemede.
• Ọ dịghị ndokwa nke multiple faịlụ edezi. A na-eme usoro na-ewe oge bụrụ na ị nwere otutu faịlụ dezie.
• adịghị ekwe ka agbakwunye lyrics na MP3 faịlụ.
Ị nwere ike iji nyere njikọ na-eji software online: http://newmaza.in/site_mp3_tag_editor.xhtml
The website ike ga-eji dezie, nyegharịa ma ọ bụ wepu ọmụma kpam kpam na na-agbakwunyere na ID3 format n'ime ọdịyo faịlụ. Star Rating: 3 n'ime 5 kpakpando (nkezi ọrụ fim)
• na-enye gị nhọrọ bulite ọdịyo faịlụ ama echekwara na kọmputa gị, ma ọ bụ ịbanye URL nke faịlụ iji dezie ha ID3 mkpado.
•-enye gị ohere ịgbanwe cover onyinyo nke ọdịyo faịlụ.
•-enye gị ohere ịgbakwunye URLs nke olu tracks.
•-enye ihe ọmụma nile na a simplified ụzọ n'ime otu window.
•-enyere gị aka ịhọrọ site na ọdịyo faịlụ dị n'ime website onwe ya.
• na-enye gị nhọrọ ebe ahụ ID3 mkpado na mmalite ma ọ bụ ọgwụgwụ nke ọdịyo egwu.
• Ọ dịghị multiple geo nhọrọ.
Ị nwere ike iji nyere njikọ na-eji software online: http://mytune.in/site_tag.xhtml
The website bụ ihe dị mfe iji freeware online ngwa na-enyere gị dezie metadata echekwara na ID3 format ke ọdịyo faịlụ. Ọ nwere ihe ọzọ mma na-akwado online nchekwa data lookups, ma si otú enye gị ohere iji kpokọta kwesịrị ekwesị na mkpado ma cover nkà n'ihi na gị music collection. Star Rating: 3 n'ime 5 kpakpando (nkezi ọrụ fim)
• Ọ mfe iji na ya mere nwere ike na-eji ma novices na ndị ọkachamara.
• Ọ dị ike na ike ga-eji maka ma onye na ọkachamara ID3 geo.
• Ọ dịla a dị mfe ma dị ọcha imewe.
• Ọ na-Egbochighi freeware online ngwa.
• Ọ dịghị ihe nhọrọ maka edezi multiple ọdịyo faịlụ n'out oge.
• agbakwụnye lyrics ka ọdịyo faịlụ bụ ekwe omume.
Ị nwere ike iji nyere njikọ na-eji software online: http://www.bdrose24.com/site_mp3_tag_editor.xhtml
The online ngwa nwere ike iji na dezie ID3 mkpado n'ime ihe ọdịyo faịlụ maka kwesịrị ekwesị management nke music n'ọbá akwụkwọ. Nke a freeware web ngwa-enye gị ohere chọọ gị chọrọ ọdịyo faịlụ site ọtụtụ online ọdụ data, ma dezie ha ID3 mkpado. Star Rating: 3.5 nke 5 kpakpando (nkezi ọrụ fim)
• Ọ na-Egbochighi freeware ngwa weebụ.
• Ọ dịla ọcha interface.
• enye niile edezi nhọrọ na otu window.
• adịghị enye ogbe edezi.
• Ọ dịghị ndokwa maka edezi mkpado nke ọdịyo faịlụ na na-echekwara na kọmputa gị ike mbanye, na na-enye gị ohere dezie faịlụ na-uploaded si online ọdụ data.
• Ọ ka nọ n'okpuru mgbe mmepe, na ike gbagote na mgbe ụfọdụ njehie.
•-akwado na-agbakwụnye nanị otu album cover nkà kwa faịlụ.
Ị nwere ike iji nyere njikọ na-eji software online: http://www.watermark-images.com/mp3-tag-editor-online.aspx
The ngwa ike ga-eji dezie MP3 mkpado ọmụma ugbu a na ID3 format na-enweghị iji wụnye software na kọmputa. Ihe omume ahụ nwere isi mkpado ubi dị ka aha, album, nka, genre, nwebisiinka, na-ekwu nke nwere ike edited dị ka chọrọ. Star Rating: 2.5 nke 5 kpakpando (nkezi ọrụ fim)
• Ọ a freeware online ngwa na ike ga-eji dị ka ọtụtụ ugboro dị ka mkpa enweghị ihe ọ bụla na-eri.
• Ọ mfe iji ma a ngwá ọrụ dị ike dezie ID3 mkpado nke ọdịyo faịlụ online.
• Ọ dịla ole na ole nke mkpado edezi nhọrọ.
• adịghị nwere ubi dị ka track ọnụ ọgụgụ na afọ nke ntọhapụ.
• adịghị ekwe ka ị dezie ọdịyo faịlụ site na-achọ site online ọdụ data ma ọ bụ na-abanye URLs nke faịlụ. Ị pụrụ nanị dezie ID3 mkpado nke MP3 faịlụ na a na-ama echekwara na kọmputa gị.
• Ọ dịghị ndokwa maka ogbe edezi.
Rịba ama: The kpakpando Fim dabeere na nkezi ọrụ 'fim ndị eji na enyocha ngwa na onwe ya. Ihe bụ isi ibiere nke kpakpando fim na-agụnye atọ dị oké mkpa isi:
• Ma website akwado isi na mkpado, agbakwunyere cover nkà, na lyrics?
• Ma ndị online ngwa nwere a ndokwa maka na-achọ ihe MP3 faịlụ site na online ọdụ data nakwa dị ka na-ebugote a faịlụ na-ama echekwara na mpaghara ike mbanye nke ọrụ 'kọmputa?
• ma ma ọ bụ website nwere ndokwa nyegharịa faịlụ site na iji mkpado ọmụma.
Olee otú Download Soundcloud Free Music (3 ụzọ)
Olee otú Mee a ngosi mmịfe na Music
> Resource> Music> Top 5 Online ID3 Tag Editors